Delta waxay daaha ka rogtay TSA Precheck lobby cusub oo u go'ay, boorso la rido
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Delta waxay daaha ka rogtay TSA Precheck lobby cusub oo u go'ay, boorso la rido
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Delta waxay daaha ka rogtay TSA Precheck lobby cusub oo u go'ay, boorso la rido.
Khibrad cusub oo karti u leh aqoonsiga waji ee Atlanta waxay siisaa gacmo-iyo qalab la'aan ku habboon dadka socotada ah min cidhif ilaa albaab.
Ku safrida madaarka caalamiga ah ee Hartsfield-Jackson Atlanta waxay xitaa u fududaan doontaa macaamiisha Delta ee iska diiwaan galiyay TSA PreCheck laga bilaabo bisha soo socota.
Delta Air Lines waxay furaysaa Delta-TSA PreCheck Express lobby-kii ugu horreeyay abid iyo hoos u dhaca boorsada.
Macaamiisha wata Fly Delta abka iyo xubinimada TSA PreCheck waxay dhawaan awoodi doonaan inay booqdaan goob cusub oo boorso loo qoondeeyay oo ku taal heerka hoose ee Atlanta's Domestic South Terminal.
Delta Air Lines ayaa ku dhawaaqay in laga bilaabo bisha soo socota, isaga oo u socdaalaya Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport waxay xitaa u fududaan doontaa macaamiisha Delta ee ku diiwaangashan TSA PreCheck, iyadoo la kordhinayo awoodaha aqoonsiga wajiga cusub iyo furitaanka Delta-TSA PreCheck express lobby iyo dhibicda boorsada.
Macaamiisha wata Fly Delta app iyo xubin ka tirsan TSA PreCheck waxay dhowaan awoodi doonaan inay booqdaan boorso cusub oo loo qoondeeyay meel u dhow heerka hoose ee Atlanta Domestic South Terminal, waxay sii maraan barta kontoroolka, oo ay raacaan diyaaradooda albaabka iyagoo isticmaalaya kaliya "aqoonsiga dhijitaalka ah" (oo ka kooban lambarka Xubinta SkyMiles ee macmiilka, lambarka baasaboorka iyo Lambarka Socdaal ee la yaqaan). Macaamiishu waxay xor u yihiin inay ka safraan gees ilaa albaab, gabi ahaanba gacma- iyo qalab la'aan.
"Waxaan rabnaa inaan siino macaamiisheena waqti dheeri ah oo ay ku raaxaystaan ​​safarka anagoo furayna khibradaha la fududeeyey, aan kala go'a lahayn oo hufan ee dhamaadka ilaa dhamaadka," ayuu yidhi Byron Merritt, Madaxweyne ku xigeenka Delta ee Naqshadaynta Khibrada Brand. "Delta Air Lines waxa uu hormuud u ahaa tijaabinta iyo hirgelinta tignoolajiyada aqoonsiga wejiga ilaa 2018 taas oo qayb ka ah himiladeenna ku aaddan dhisidda garoomada diyaaradaha kuwaas oo aan dadaal lahayn. Daahfurka Atlanta'Lobby express' iyo hoos u dhigista boorsada ayaa ah tillaabadii ugu dambeysay ee ballankayaga ahaa inaan dhageysi iyo hal-abuur u samayno macaamiisheena."
Waa kuwan sida waayo-aragnimada cusub ee Delta ay u fududayn doonto gaadiidka iyada oo loo marayo saddexda goobood ee garoonka diyaaradaha ee Atlanta: